Dhageyso :-Madaxweyne Lafta-gareen oo war ka soo saaray marxaladdii deyn cafinta Soomaaliya - Awdinle Online
Dhageyso :-Madaxweyne Lafta-gareen oo war ka soo saaray marxaladdii deyn cafinta Soomaaliya
March 26, 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen ) ayaa boggaadiyey guulaha laga gaaray barnaamijka deyn cafinta, kadib markii ay Soomaaliya shalay buuxisay maraxaladii koowaad.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhoweeyey heerka uu gaaray xiriirka iskaashi ee DF iyo hay’adaha maaliyadeed ee adduunka.
Madaxweyne C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen ), ayaa Shir Jaraa’id xafiiska ku qabtay Waxuu uga hadlay guusha shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyatay iyo wadadii loo soo maray deyn cafinta.
Dowladda dhexe ayaa ka go’an in meel sare ka gaarto dhameystirka qorshaha deyn cafinta oo xilligaan muhiim u ah Soomaaliya.
Previous articleDhageyso :-Ganacsatada baydhabo oo Digniin loo diray
Next articleVilla Somalia oo Albaabadda loo laabay